PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: သြော် .... ဒီလိုကိုး မောင်သံဒိုင် ( ဘောဂဗေဒ )
သြော် .... ဒီလိုကိုး မောင်သံဒိုင် ( ဘောဂဗေဒ )
…. စာရေးသူက ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဌရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေဖန်ပြောကြားချက်ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်မိပါရဲ့ ။ ချင်းအမျိုးသားကြီးရဲ့ရိုးသားပွင့်လင်းမှုကိုလည်း အလွန်လေးစားမိနေပါတယ်။ စာရေးသူတို့ လို သင့်လျော်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာမလားလို့မျှော်နေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ၀မ်းနည်း နေမိပါတယ်။ သူ့ အဆိုအရ . . .
” တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီမှာ ကျွန်တော်က ဥက္ကဌရာထူး ယူထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်ဝန်ခံချင်တာက လွှတ်တော်ထဲ ရောက်တဲ့ ပုဂိုလ် ကျွန်တော်အပါအ၀င် မတော်မတည့်တဲ့ နေရာတွေကို ရောက်သွားတာပါပဲ။ အဲဒါ ကျွန်တော်ရှင်းရှင်း ၀န်ခံချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လုံးဝ အားမကိုးကြပါနဲ့ လို့မြန်မာတပြည်လုံးကို ပြောချင်တယ်။ အားမကိုးကြပါနဲ့ ။ အကုန်မတော်မတည့် နေရာတွေကို ရောက်နေကြတာပါ။တော်ရာတည့်ရာပြောမယ် ကြိုးစားတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ မှာ တောပြောတောင်ပြော၊ နားထောင်မယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတာ (ရုပ်သံ)ဖွင့် ၊ နောက်ဆိုမဖွင့်နဲ့ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပရောဆက်( Process )တခုအရ ဒီလွှတ်တော်ကတော့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ လုပ်ရမှာပေါ့။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း လွှတ်တော်ရဲ့ အသိ၊ လွှတ်တော်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ လွှတ်တော်ရဲ့ ပြည်သူ့ နီတိဆိုတာ ရှိတာကိုး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးမို့ လို့ပြောနိုင်တာ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ဘာမှအထင်ကြီးစရာ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာ။ ဒါပေမဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တယောက်က ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှခံချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်မို့ လို့ ပြောရဲတာ။ ကျွန်တော်ဝန်ခံတာ၊ အမှန်အတိုင်း ကျွန်တော်ပြောတာ။ နောက်မို့ လို့ အကုန်လုံးက ခေါင်းညိတ်ဖို့ လောက်ပဲ၊ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ရင်လည်းပဲ ဥပဒေတခုပြုတော့မယ်ဆိုရင် ငါထအော်ဦးမှ၊ ငါလည်း တစ်ခွန်းလောက်ထပြောဦးမှ အဆင့်ပဲရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရွာမှာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လမ်းမှာ၊ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးရွာမှာ လမ်းဖေါက်ဖို့ ကိစ္စ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြောရမယ့်ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ လွှတ်တော်ဆိုတာ အစီအစဉ်ရှိ မရှိ မေးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါလုပ်ပါလို့ ပြောရမယ့်ဟာ၊ အစိုးရကို ခိုင်းမယ့်ဟာ၊အခုမှ အစိုးရကို သံတော်ဦးတင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်မှာ မီးရရှိဖို့အစီအစဉ်ရှိ မရှိ သိပါရစေ။ ဟိုကလည်း ရှိတယ်၊ ပိုက်ဆံရှိရင် လုပ်ပေးမယ်။ တနှစ်တနှစ်လွှတ်တော်တက်တာ သိန်း ၆၀၀ ကုန်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောပြနေတာ။ အလကား ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ဟန်ပြထိုင်နေကြတာ”
စာရေးသူက ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးထားတာကို ဖတ်ရင်းနဲ့အားမရနိုင်လို့ဆောင်းပါးထဲ ထည့်ရေးပေးလိုက်တာပါ။ စာရေးသူအပါအ၀င် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကြီး ပြန်စတော့မယ် ဆိုကတည်းက ဥပဒေတွေ ၊ပေါ်လစီရေးရာတွေမှာ ဘာတွေအပြောင်းအလဲဖြစ်မလဲ မျှော်လိုက်ကြရတာပါ။ စာရေးသူတို့ က အကျင့်ရပြီးသားပါ။ ဒီတစ်ခါမပြောင်းသေးရင်လည်း နောက်တစ်ခါပေါ့။ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူတို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတာပါ။ ပြောင်းတော့မလား ပြောင်းတော့မလားနဲ့လာခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေဟာ နှစ်၅၀လောက် ရှိခဲ့ပြီကိုး။ အခုလည်း အထက်အောက် ညီညွတ်တဲ့အရွေ့ ကိုတွေ့ ရဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာပါ။ အခုတော့ဖြင့် ချင်းအမျိုးသားပါတီဥက္ကဌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ပြောပြတော့မှာပဲ " သြော် . . . ဒီလိုကိုး " လို့သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခု ချလိုက်မိပါရဲ့ ။
မောင်သံဒိုင် ( ဘောဂဗေဒ )